Khadka TramNUMX Terminal Tram Line | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaKhadka TramNUMX Terminal Tram Line
Khadka TramNUMX Terminal Tram Line
29 / 11 / 2019 16 Bursa, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, taraamka
khadka tareenka ee laba-geeska magaalada
Khadka aan dhamaadka lahayn ee Wadada Tumashada Magaalada Bursali ee Magaalada Bursali; Qadka T2015 tram, kaasoo hindisahiisa uu sameeyay Duqa Magaalada Altepe ee 2, ma uusan dhammaan inkastoo 2018 loo ballanqaaday in la dhammeyn doono bisha Juun.
universal 'de Ugaur Ökdemir sida ay wararku sheegayaan; Dhibaatooyinka deegaanka ee Bursa, oo la halgamaya dhibaatooyin fara badan sida wasakhowga hawada, magaalooyinka qalloocan iyo gaadiidka, ayaa iyagana lagu soo daray mashaaricda aan dhammaadka lahayn. Garoomada cusub ee Bursaspor oo had iyo jeer ajandaha ku jira iyada oo kharashkiisa iyo madaxa muuqaalka garoonka ee aan la dhammaystirin sannado, magaalada Istanbul loo qaybinayo laba dariiqo iyo khadka tareenka T2 ee aan la dhammaystiri karin.
Khadka tareenka ee T2, oo loo qorsheeyay inuu ka bilowdo fagaaraha magaalada oo uu gaaro xarunta basaska iskuxiran ee Bursa, waxaa kireystay Recep Altepe, Duqa waqtiga, 2015. Mashruucu weli ma dhammaan, inkasta oo qandaraasluhu ballanqaaday inuu dhammaystirayo khadka bisha Juun ee 2018. Intaa waxaa sii dheer, shaqada khadka tareenka ku dhawaad ​​ma jiraan, in kasta oo taariikho cusub si joogto ah loo bixiyo.
Alinur Aktaş, oo xafiiska qabtay ka dib markii Recep Altepe, uu ku sheegay hadal uu soo saaray 20 September 2018, isagoo caddeeyay inay dejiyeen muddadii ugu dambeysay ee 2 bil kasta khadka tareenka T3 wuxuuna yidhi, Hadaad tiraahdid waxa dhaca, way adkeysan doonaan .. Xilli dambe, Aktaş wuxuu ku sheegay bayaankiisa 25 Janaayo: açık Waxaan ubaahanahay inaan isku darno khadka T2019 iyo nidaamyada kale ee tareenka. Waxaan go'aansanay inaan dhulka hoostiisa ku jirno mitirka 2 ee dhinaca barxadda magaalada Kullan
Diidmada qolalka xirfadleyda ah ee sheegaya in mashruucu khaldanaa ilaa bilowgii khadka tareenka T2 lama dhageysan oo wadada Istanbul waxaa loo qeybiyay laba. Ganacsatada ku sii jeeday Istanbul waxay saameyn xun ku yeesheen shaqooyinka mashruuca aan dhamaanin waxayna xireen wadada taraafikada. Ku soo noqoshada sheekada mashiinka T2 tram ee masaska, isagoo sheegaya in farshaxan yahanka uu dhibaato ka soo gaadhay wada hadalada 'wadajirka khaldan' waa.
Boqolaal geed ayaa la jaray
Birkan Yeil, oo sheegay inaanay ka gudbi karin wadada; Masaafada Masaafada u dhaxaysa labada isweydaarsi waa mashruuc aad u fog, aan loo baahnayn. Wadadan waxaa ku sugnaa boqolaal geedo ah qaar badan oo ka mid ahna waa la jaray. Hada waxaa jira dhismo aan dhamaad laheyn, oo wadada waxaa u kala go'ay dad ka boodaya faraha birta. Waxaan weydiineynaa Injineerada waxay yiraahdaan taasi waxay ku dhammaanaysaa mid aad u adag. Waxay ahayd inay dhulka hoostiisa ku sameeyaan. Maalmahan, dhibaatada taraafikada ayaa sii kordhayay maalin kasta waxayna ku soo kordhiyeen dhibaato cusub Bursa. Ma aha in la xuso wasakheynta deegaanka, boodhka iyo wasakhda aan markasta halkan ku soo jiidannay ganacsiyada. Waxay daadiyaan asfado, bil ka dib markay yimaadeenna waxay u qodaan biyo. Mar labaad asphalt ayaa gadaal looga tuuray si uu u noqdo gaaska dabiiciga ah oo saddex jeer qoday. Hadda waxaa la sheegayaa in fiilooyinka korantada la dejin doono oo mar kale la qodi doono. Waxaan u malaynayaa duqa hore inuu masuul ka yahay shahaadadan koowaad. Waxay sameeyeen mashruuc aan dhammaad lahayn.
Dhibaatooyinka TAHRIIBKA MA KALIYA KHATARTA JIDKA
Qiyaastii 16-17 Alihan Emre Vanlı wuxuu sheegay inuu lahaa dukaanno waddada u aaday Istanbul sannado; “Mashruuc aad u khaldan ayaa si joogto ah dib loo dhigaa. Waxay ku jareen wadada badh, waqti aad u dheer ayaan wadada ku socon jirnay. Jid toosan ayaa qaadan lahaa dhulka hoostiisa halkii aad ka qaadan lahayd dhulka korkiisa. Qaabkaan, labada jidba way ciriiri lahaayeen gaadiidkuna waxay noqon lahaayeen kuwa deggan. Weydii dadweynaha marka ay diyaarinayaan mashruuca, laakiin ma ahan. Mid ayaa yiri waxay noqon doontaa sida meeshan ay sanado badan ka shaqeyneysay. Jahawareer dheeri ah ayaa dhacda taa bedelkeeda, maadaama dhibaatada taraafikada aan lagu xalinin yareynta wadada.
DHAMMAAN dariiqooyinka Magaalada oo dhan
Esn 20 Bursa wuxuu qaatay sanado dib markii uu u falceliyay, ganacsato kale oo aan dooneynin in magaciisa la sheego; Ma jiro wax jahwareer ah haddii qof walba uu shaqadiisa qabsado. Qof kasta indhihiisa wuxuu ku hayaa midba midka kale shaqadiisa. Waxaan ahay ganacsade u codeeyay AKP laakiin mashruucan waa mashruuc khaldan. Waxaan u maleynayaa in uu marin habaabiyay Madaxweynaha. Tan waxaan usheegay xildhibaanada AKP ee nagu soo booqday, maxaa yeelay qalad ayaa lagu sameeyay. Xaq uma lihi kuwa iyagu oggolaaday mashruucan. Intii lagu jiray bishii 3 markii ay shaqadu billowday, awood uma lihin inaan ganacsi sameysanno. Xaaladdani kuma habboona Green Bursa. Waxay ku isticmaali jireen biyaha badda Marmaray gudaha Istanbul, laakiin way kari waayeen. Magaalada ayaa u qaybsan dhammaan waddooyinka. Wadada Izmir waxaa loo qeybiyay labo, hada wadada Istanbul waxaa loo qeybiyaa labo. Sow dhulka hoostiisa laguma dhisi karo? Tani waa mashruuc dhimatay aniga ahaan, waxay ahaan lahayd waddo shan-haad ah, laakiin way kari waayeen. Waxaan bixiyaa biilkayga, canshuurtayda. Qof kasta oo saxeexa mashruucan, oo faraha kor u qaadaya ayaa mas'uul ka ah, inay la xisaabtamaan. ”
Halis khatar ah ayaa sugeysa dadka deegaanka Bursa T1 Tram Line
Roobka Roobka iyo Shaqo Joogteyn Joogtada ah ee Eskişehir
Ununoqonimo la'aanta ee Pınarbaşı Aytepe Cable Line
Dadka deegaanka waxay bilaabaan inay qoraan shirwaynaha baabuurta casriga ah
Maalinta dadka ee baabuurka telefishanka
Madaxweyne Altepeden Bursaallara oo ah labo laabji
IDO wuxuu Bursali u suurtagelin doonaa in uu si fudud u galo shabakadda metro ee Istanbul
Goobta basaska ee Intercity Bus
Kantaroolka Gawaarida Kent-Terminal Tram